cookie မူဝါဒက | အဆိုပါ Rward ဖောင်ဒေးရှင်းမှ - မေတ္တာသည်လိင်နှင့်အင်တာနက်
ဤစာမျက်နှာကိုအဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ၏ cookie ကိုမူဝါဒအထွက်သတ်မှတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုသငျသညျအကြှနျုပျတို့အတတျနိုငျဆုံးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူများကိုကူညီပေးဖို့, အဖြစ်အားလုံးနီးပါးဝက်ဘ်ဆိုက်များပြု cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ကွတ်ကီးသငျသညျဝက်ဘ်ဆိုက်များ browse လာသောအခါသင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာနေရာချစကာဖြစ်ကြောင်းသေးငယ်တဲ့စာသားကိုဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်။ cookies များကိုသယ်ဆောင်သတင်းအချက်အလက်များသည်သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သည်မဟုတ်, သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောကိုယ်ပိုင်ဝဘ်အတွေ့အကြုံကိုပေးဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ cookies တွေကို၏အထွေထွေအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုလေ့လာလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး Cookiepedia - ကွတ်ကီးများအားလုံး.
ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies များကိုကျွန်တော်တို့ကိုကူညီ:
အဆိုပါ site ၏အမြန်နှုန်း / လုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်
သငျသညျကို Facebook နဲ့တူလူမှုကွန်ယက်နှင့်အတူစာမျက်နှာများကိုဝေမျှဖို့ Allow
စဉ်ဆက်မပြတ်သင်တို့အဘို့အကြှနျုပျတို့၏ website တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ကပိုထိရောက် Make (နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုပါစျေးနှုန်းမှာလုပျန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ရန်ကူညီပေးနေ)
(သင့် express ကိုခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ) ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း
(သင့် express ကိုခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ) မည်သည့်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း
တတိယပါတီများမှမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ် data တွေကိုဖြတ်သွား
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအောက်တွင်ကိုအသုံးပြုဖို့အပေါငျးတို့သ cookies တွေကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကို cookies တွေကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုချက်ပေးအပ်
သင်ဤ website ကိုကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုနေသည်ကြောင်းကိုသင်၏ software ကိုပေါ်လျှင် setting များကို (သင့် browser ကို) ဒီယူ cookies တွေကို accept, ငါတို့က်ဘ်ဆိုက်၏သင့်ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်း, သင်သည်ဤအတူဒဏ်ငွေဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုရန်ချိန်ညှိနေကြသည်။ သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကနေ cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်မရန်ဆန္ဒရှိသင့်ပါတယ်, သို့သော်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖွယ်ရှိသငျသညျမြျှောလငျ့ထားမယ်လို့အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ site အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုပါလိမ့်မယ်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်အမည်ကွတ်ကီး: ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် cookies တွေကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုအလုပ်အပါအဝင်လုပ်ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ:
သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး setting များကို Remembering
ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုမသုံးဖို့ထက်အခြားကိုသတ်မှတ်ခံရခြင်းသည်ဤ cookies များကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လမ်းမရှိ။
ဒီ site ပေါ်တွင် cookies Google Analytics နဲ့ The ဆုကြေး Foundation ကသတ်မှတ်ထားကြသည်။
third party ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုအများစုဝက်ဘ်ဆိုက်များကဲ့သို့တတိယပါတီများကထောက်ပံ့ပေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတို့ပါဝင်သည်။ တစ်ဦးကဘုံဥပမာတစ်ခု embedded ယူကျု့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကို cookies များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်အရာအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်:
Google က (YouTube ကို) - ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
ဒီကွတ်ကီးတွေကို disable လုပ်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်ဤတတိယအုပ်စုတွေကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လုပ်ဆောင်မှုချိုးမည်
Facebook နှင့် Twitter ကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ Like တွင်အလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သည် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်မျှဝေခြင်းခလုတ်များထည့်နိုင်သည်။
ဒီအပေါ် privacy ကိုဂယက်ရိုက်လူမှုရေးကွန်ရက်ကနေလူမှုရေးကွန်ယက်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်, သင်သည်ဤကွန်ရက်များပေါ်တွင်ရွေးကောက်တော်မူပြီ privacy ကိုဆက်တင်ပေါ်တွင်မှီခိုကြလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လူမည်မျှရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ မည်သည့်နည်းပညာအမျိုးအစားကိုသုံးသည် (ဥပမာ - ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အထူးသဖြင့်နည်းပညာများအတွက်အသုံးပြုသင့်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သည်ကိုခွဲခြားသိနိုင်သည့် Mac သို့မဟုတ် Windows) ကဲ့သို့သော statistics ည့်သည်စာရင်းဇယားများကိုစုဆောင်းရန် cookies များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ မည်သည့်စာမျက်နှာများကိုကြည့်သည်စသည်တို့ကို site ပေါ်တွင်ဖြုန်းကြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ဤရွေ့ကားဒါခေါ် 'ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု' '?? ပရိုဂရမ်များကမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုလူသိအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မကူညီမီဤဆိုက်ကိုမည်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း (ဥပမာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှ) မည်သူမည်ဝါရောက်ရှိကြောင်းအမည်မသိဖြင့်ပြောပြပါမည်။
Google Analytics သင်သည်ထိုသူတို့အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေနိုင်သည် ဒီမှာ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ် Analytics ၏လူ ဦး ရေဆိုင်ရာနှင့်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာသတင်းပို့ခြင်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏သက်တမ်းနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုများကိုအမည်မဖော်လိုသည့်အမြင်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အလက်များကိုသုံးနိုင်သည်။
ကွတ်ကီးဟာ Off ဖွင့်
သငျသညျအများအားဖြင့်ကွတ်ကီးများကိုလက်ခံခြင်းကနေရပ်တန့်ရန်သင့် browser setting ကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့် cookies များကိုပိတ်ထားနိုင်ပါတယ် (ဘယ်လိုလေ့လာပါ ဒီမှာ) ။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကမ္ဘာ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အများစု၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကန့်သတ်လိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် cookies များသည်ခေတ်သစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အများစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
“ cookies” နှင့် ပတ်သတ်၍ သင်“ spyware” နှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ browser ထဲတွင် cookies များကိုပိတ်ထားမည့်အစားထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းဟုယူဆရသော cookies များကိုအလိုအလျှောက်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့် spyware anti-software သည်တူညီသောရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိကြောင်းတွေ့နိုင်သည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ antispyware ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ cookies များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း.
ဒီ site ပေါ်တွင် cookie ကိုသတင်းအချက်အလက်စာသားကို Attacat အင်တာနက်ကိုစျေးကွက်ကပေးအပ်အကြောင်းအရာကနေဆင်းသက်လာခဲ့သည် http://www.attacat.co.uk/Edinburgh ကိုအခြေစိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် website အတွက်အလားတူသတင်းအချက်အလက်များကိုလိုအပ်ခဲ့လျှင်သင်သည်သူတို့၏အသုံးပွုနိုငျ အခမဲ့ cookie ကိုစာရင်းစစ် tool ကို.
သင်တစ်ဦးကိုသုံးကြလျှင် ခြေရာမခံပါနဲ့ ဘရောက်ဇာကို setting ကိုကျနော်တို့သင်တို့သည်ဤ cookies များကိုခွင့်ပြုချင်ကြပါဘူးတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ဤ ယူ. , သူတို့ကိုပိတ်ဆို့ထားလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားကျနော်တို့ပိတ်ဆို့ setting များကိုနေသောခေါင်းစဉ်: